inspire – OOTDMYANMAR
A PRESENTER SHARES TIPS ON HOW TO ACHIEVE YOUR GOAL
No Comments on A PRESENTER SHARES TIPS ON HOW TO ACHIEVE YOUR GOAL
Presenter တစ်ဦး ဝေမျှထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရရှိစေနိုင်မယ့်အချက်များ
Some Burmese settle for less simply because they’re afraid to step out of their comfort zones. It’s easier to let dreams beadream and settle on what you have, rather than risking failure to achieve what you want.
အချို့မြန်မာလူမျိုးတွေက comfort zones လို့ခေါ်တဲ့ ပူပင်ကြောင့်ကျမှုမရှိတဲ့ အခြေအနေကို ကြောက်ရွံ့ကြတဲ့အတွက် သာမာန်ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝကိုပဲရွေးချယ်နေထိုင်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနေထိုင်တာက ကိုယ်လိုချင်တာတွေကိုရရှိဖို့ စွန်းစားမှုတွေ၊ ရှုံးနိမ့်မှုတွေကို ကြုံရတာထက် ကိုယ့်မှာရှိတာနဲ့ ရောင့်ရဲပြီး ကိုယ့်အိပ်မက်စိတ်ကူးတွေကို အိပ်မက်အဖြစ်ပဲထားဖို့က ပိုလွယ်ကူပါတယ်။
In an effort to empower Burmese to aspire and do big, we are going to doacampaign (with the help of MDSMYANMAR) called #dreambig. We want to feature individuals who inspires.
မြန်မာလူမျိုးတွေကို ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားနိုင်ဖို့အတွက် တွန်းအားတစ်ရပ်ဖြစ်စေဖို့ OOTDMYNMAR က (MDSMYANMAR ရဲ့အကူအညီနဲ့) #dreambig ဆိုတဲ့ campaign တစ်ခုပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒီကဏ္ဍအတွက် ရည်မှန်းချက်ကြီးပြီး လေ့လာအတုယူနိုင်မယ့်လူတွေကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။
Yin Moe Htet is wearingadress and leather jacket from MDS MYANMAR.
So that “if” can be turned into “can”. For our first series, Yin Moe Htetapresenter shares her tips in achieving your goal. Here are her tips:
“အကယ်၍” ဆိုတဲ့စကားလုံးကို “လုပ်နိုင်တယ်” ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲကြရအောင်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Presenter ယဉ်မိုးထက် က ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိစေမယ့် သူမရဲ့ အကြံပေးစကားလေးတွေကို ဝေမျှပေးထားပါတယ်။ ဘာတွေလည်းဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
Self-doubt will definitely cut your potentials. Don’t be afraid to try new things! Have faith in yourself and grab the opportunities that come your way.
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သံသယ စိတ်တွေဝင်နေခြင်းက သင့်ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေကို အနိုင်ယူချေဖျက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ခြေလှမ်းအသစ်တွေလှမ်းဖို့ လုံးဝမကြောက်ရွံ့ပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိပါ။ ကိုယ့်ရှေ့ရောက်လာတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို အမိအရဆုပ်ကိုင်ပါ။
Learn how to verbalize your feelings. Sometimes thoughts/feelings kept could hinder you from maximizing your potential.
ပြောဆိုဆက်ဆံပါ ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ဘယ်လိုထုတ်ဖော်ပြသရမလဲဆိုတာ သင်ယူပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ခံစားချက်တွေကို မြိုသိပ်ထားတာက ကိုယ့်ရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ရာမှာ အဟန့်အတားတွေဖြစ်စေပါတယ်။
Your goals always need an action. Achieving your dream doesn’t come overnight it starts with taking that one small step. And that time is now!
လက်တွေ့ကျကျဆောင်ရွက်ပါ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တိုင်းက လက်တွေ့ကျတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရှေ့ကို ရုတ်တရက်ရောက်လာမယ့်အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းကနေအစပြုရမှာဖြစ်ပြီး အခုပဲ အဲ့ဒီခြေလှမ်းကို စ, လှမ်းလိုက်ပါ။
Know your purpose on why you want to achieve your goals. Makingadifference—not just for yourselft, but also for others’ would beamore fulfilling dream.
စိတ်ကူးဉာဏ်ရင့်သန်ပါ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်တိုင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိပါစေ။ ကိုယ့်အတွက်တင်မကဘဲ အခြားလူတွေအတွက်ပါ မတူညီတဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်ခြင်းက အိပ်မက်တွေဖြည့်ဆည်းရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
Tags Fashion, inspire, MDS, mdsmyanmar, ootdmyanmar